Maxkamadda Yurub oo go’aan ka gaartey go’aamadii Iswiidhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxkamadda Yurub oo go’aan ka gaartey go’aamadii Iswiidhen
La daabacay torsdag 27 juni 2013 kl 09.27
Maxkamadda Yurub ayaa maanta Iswiidhen ka cafisay dacwaddii lagu soo oogey oo ku saabsanayd siddeeddii xukun oo magangelyada loogu diidey dad ciraaqiyiin ah oo Iswiidhen magangelyo ka codsaday. Maxkamaddu waxay caddeysey in aysan hay’adaha Iswiidhen jebin qaraarka Yurub oo ku saabsan xuquuqda aadanaha.
Lix ka mid ah dadkaas ciraaqiyiinta ahi waxay ku doodayaan in ay xabsi mudanayaan haddii Ciraaq loo masaafuriyo maadaama ay ka tirsan yihiin dadka masiixiyiinta ah oo laga tirada badan yahay. Labona waxay sheeganayeen in ay sharaf-qoys awgeed naftoodu khatar ku sugnaaneyso haddii Ciraaq loo msaafuriyo
Ururo ay ka mid yihiin ururka qaxootiga ee Qaramada MIdoobey iyo Amnesty International ayaa waqtiyadii ugu dambeeyey Iswiidhen ku dhaleeceynaayey dib u celinta ciraaqiinta masiixiga ah.
Waxaa kaloo ka mid ah xukunada ay maxkamaddu soo qaadeyso labo dhacdo oo ku saabsan ciraaqiyiin sheeganaya in ay sharaf-qoys awgeed naftoodu khatar ku sugnaaneyso haddii Ciraaq loo msaafuriyo.
Maxkamaddu waxay u aragtaa in dadka masiixiga ah ee ku nool Ciraaq ay kadeed qabaa, aysanna wax badbaado ah ka helin dowladda dhexe. Laakiin maxkamaddu waxay soo jeedineysaa in masiixiyiinta ka cabsiqaba in la cadaadiyo ay guuri karaan waqooyiga Ciraaq oo lagu magacaabo Kurdistaan.